UZuma ukhiphe umama wengane yakhe, kodwa ubuyile njengomama wekhaya waseThekwini | Scrolla Izindaba
UZuma ukhiphe umama wengane yakhe, kodwa ubuyile njengomama wekhaya waseThekwini
UNonkanyiso Conco, umama wengane kaJacob Zuma oweyingoduso yakhe, uzodlala emdlalweni wakumabonakude ongokoqobo, i-Real Housewives of Durban, ozoqala kule nyanga.
UConco, oneminyaka engama-26, unendodana eneminyaka emithathu noZuma, oneminyaka engama-79, kodwa ubudlelwano bakhe nalowo owayenguMengameli baphela nyakenye.
Umfowabo kaZuma, uKhanya, uthe umndeni awunalutho ongalusho ngendima entsha kaConco kumabonakude.
“Yimpilo yakhe futhi angenza noma yini afuna ukuyenza ngayo. Njengomndeni wakwaZuma, akukho esizokusho noma sikwenze mayelana nalokhu,” kusho uKhanya.
Ebuzwa ukuthi ngabe uZuma unayo yini imibono ngalolu daba, uKhanya uthe, “Ngiyangabaza ukuthi unawo.”
Uthe uZuma umatasa ulwa impi yezomthetho ukufakazela ukuthi umsulwa ecaleni lokuthengwa kwezikhali.
“Akanaso isikhathi semibukiso engokoqobo nabantu ababonakala kuleyo mibukiso. Unezinto ezibucayi okufanele azikhathaze ngazo njengokugeza igama lakhe.”
UConco waba sematheni kowezi-2018 ngemuva kobudlelwano bakhe noZuma, owayenguMengameli ngaleso sikhathi.
Yize kunokubuyela emuva kwesikhala seminyaka yobudala engama-53, uConco wahlala engenalo uvalo futhi waqhubeka nokubonisa uthando lwabo ezinkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngemuva kwezinsolo zokuthi ubudlelwano bakhe noZuma buphenduke bababubi nyakenye, wanyamalala emehlweni omphakathi.
UZuma ubuye wamkhipha endlini yakhe yaseZimbali ebabazekayo, enyakatho neTheku.
Umbukiso obhekwe ngabomvu uzoqala ukukhonjiswa ngomhlaka zingama-29 kuMasingana ngo-19h00 ku-1Magic. Abanye besifazane abaziwayo abenze lo msiko ngu-Ayanda Ncwane, ongunkosikazi womculi we-gospel ongasekho owanqoba izindondo eziningi, uSfiso Ncwane, kanye nonkosikazi kasomabhizinisi ongusozigidi uVivian Reddy, uSorisha.
UConco akazange aphendule ezicelweni zokuphawula.